An kuhlaselwa Abaxhobileyo komthetho Canadian Crypto Exchange - Blockchain News
Ngokuhlaselwa abaxhobileyo bagqithele Canadian Crypto Exchange
Ngolwesibini, EyoMqungu 23, 2018, emhlabeni 11 am, abaphangi abathathu bangena kwiofisi waseKhanada Bitcoins e Ottawa, wahlasela namalungu amane exchange. Ukuba enxulumene nabo kwaye zisongele kunye nompu, izaphuli-mthetho babefuna ukuba iintlawulo ze-exchange kubo. Umsebenzi wesihlanu, abasala siyathandaza, ngokuthi amapolisa, Zaye ke nezihange, wabaleka into.
Omunye umsolwa, ngumhlali oneminyaka eli-19 ubudala Ottawa, ilaliswe. Lona lancethezwa inkunzi kunye nokusetyenziswa kompu nokugcinwa ngenkani. Amapolisa Ottawa bafuna nxaxheba ababini abangakumbi ulwaphulo-mthetho.
Uhlelo eKhanada ICBC News iingxelo ukuba abaphangi wafuna imali kwi exchange crypto.
Lo asinguye na ukuhlaselwa yokuqala abanini of Cryptocurrency. ngo November, Ndingumhlali of New Jersey, Louis Metz, wahlaselwa umnini zosasazo. Kusongela gun, ke bayithatha ifowuni kunye zabucala nezitshixo mobile yexhoba, leyo esetyenziselwa ukufikelela isikhwama digital. Nje ngeziphumo, yena weba $ 1.8 million lwemali crypto. Umoni lijongene ukuya ku 25 iminyaka entolongweni.
Post Previous:Blockchain News 25 EyoMqungu 2018
Post Next:Sezibalo kubalwa amaxabiso bitcoin ngenxa 2018